सय बर्ष पार गर्दा पनि छैन नागरिकता - Sarokar Khabar
२२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
२२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७1
सिन्धुली, २२ मंसिर २०७७
छत्रमाया मगर कमलामाई नगरपालिका १३ रुचानीमा बस्दै आउनु भएको छ । उमेरले उहाँ एक सय बर्ष पार गर्नु भई सकेको छ । यो उमेरमा पनि उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन् ।
नागरिकता नहुँदा उहाँ राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुदै आउनु भएको छ । नागरिकता बनाउन बा आमाको नागरिकता चाइन्छ उहाँले भन्नुभयो बा आमा कोही पनि हुनुहुन्न श्रीमानको पनि ५ बर्ष अघि मृत्यु भयो । अव मेरो नागरिकता कस्ले बनाईदिएला उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ?
श्रीमानको पनि मृत्यु भएपछि नातामा नाती पर्ने पदमबहादुर रानामगरले बृद्धाको हेर विचार गर्दै आएको स्थानीयको भनाई छ । पदमको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर छ, ज्याला मज्दुरी गरेर भ पनि बृद्धाको हेरविचार गर्दै आएका छन् । उनको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर छ । नागरिकता बनाउन पहुँच नै पुग्दैन ।
नागरिकता जन्मेपछि पाउनु पर्ने हो तर उहाँलाई किन नागरिकता दिईएन ? नागरिकता बनाउन सहयोगी मनहरुले पहल चालिदिनु प¥यो स्थानीय एकराज पहाडीले भन्नुभयो नागरिकता बनाइ दिएर बृद्धा भक्ता दिएमा उहाँको पालनपोषणमा ठुलो राहत पुग्ने बताउनुभयो । घर परिवारका सदस्यले साँची बसेर नागरिकता बनाउन नपाउने भन्ने सुनेपछि उहाँको नागरिकता बनाउन पहल नै भएको छैन् । हतपते माइति बताउने छत्रमायाले अहिले माइति पक्षका आफन्त कोहि पनि नभएको बताउदै आएको उहाँले भन्नुभयो ।
नजिकका आफन्त नहुँदा नागरिकता उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन् । विगत ५ बर्ष अघि उहाँको पनि मृत्यु भयो । अव नागरिकता कसरि बन्छ ? पहल गरिदिन उहाँको आग्रह रहेको छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नागरिकता प्राप्त गर्नु अघि भर्नु पर्ने विवरणहरु भरी आवश्यक प्रमाणहरु पुग्ने कागज पत्र पेश गरेमा नागरिकता दिन सकिने बताउनुभयो । उहाँको तिनपुस्ते विवरण, श्रीमानको मृत्यु दर्ता लगाएतका प्रमाण पुग्ने कागजपत्र सहित वडाको सिफारिस लिएर आएमा नागरिकता दिन सकिने बताउनुभयो ।
११ चैत्र २०७६, मंगलवार १२:३५0
सिन्धुली, ११ चैत्र / सिन्धुलीमा आज थप एक जनालाई सिन्धुली अस्पतालले आइसुलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरेको छ । हिजो भारतको सिलगुढीबाट आएक कमलामाई नगरपालिका वडा नं. २ का १९ वर्षिय युवालाई आइसोलेसनमा भर्ना ग
२४ माघ २०७६, शुक्रबार १२:३५0
जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन दिदैछौ : मुख्यमन्त्री पौडेल
२०७६ हेटौंडा, २४ माघ / रेडियो र विविधता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम हेटौडामा गरिएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले ९ औ रेडियो दिवस २०२० को अवसर पारेर अन्तरक्रिया गरेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्
[…] सय बर्ष पार गर्दा पनि छैन नागरिकता […]
केशव देवकोटाद्धारा केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २२ मंसिर २०७७, सोमबार ०२:३७